Hypothyroidism vs. hyperthyroidism: Zvinokonzera, zviratidzo, uye kurapwa - Dzidzo Yehutano | Chikunguru 2021
Kambani, Nhau Info Info, Nhau Kambani, Iyo Checkout Nharaunda Dhinda Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Checkout Kambani, Info Info Zvinodhaka Info Hutano Dzidzo, Nhau Wellness Nhau, Wellness Hutano Dzidzo, Hutano Zvipfuwo Nhau
Kuru >> Dzidzo Yehutano >> Hypothyroidism vs. hyperthyroidism: Enzanisa zvikonzero, zviratidzo, kurapwa & nezvimwe
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism: Enzanisa zvikonzero, zviratidzo, kurapwa & nezvimwe
Hypothyroidismuyehyperthyroidisminosanganisira thyroid nenzira dzakasiyana.Hyperthyroidisminotsanangura utachiona hunogadzira zvakareHormone yakawanda. Izvi zvinozivikanwawo seyakanyanyisa kuita utachiona. Mukuenzanisa,hypothyroidismyakanyanya iri reverse nyaya.Hypothyroidisminoitika apo utachiona huri kuburitsa hushomautachiona kemikari. Nomuzvarirwo, nzira dzekugadzirisa idzi dzakaparadzana nyaya dzakasiyana zvakanyanya. Dzidza zvakawanda nezve zvikonzero, kuongororwa, kurapwa, uye kudzivirira mune irwo ruzivo runotevera.
Autoimmune chirwerendiyo inonyanya kukonzera hypothyroidism . Izvo chaizvoautoimmune kusagadzikanainonzi seHashimoto's thyroiditis. Izvi zvisingawanzoitika zviitiko zvinouya kuzobudirira kana iwe uri wakomasoja ekudzivirira chirwerekurwisa utachiona hwako, zvichitungamira mukugadzirwa kushoma kweiyo thyroid hormone. Izvi zvinoitika zvinogona kusanganisira zvikamu zvakawanda zvemuviri; zvisinei, zvinoitika mugland gland.
Nyanzvi dzehutano havasati vawana mhinduro yekongiri yekuti sei izvi zvichiitika. Kufungidzira kwakanakisa kwazvino kusanganisa kwezvinhu zvinogona kusanganisira zvakakukomberedza pamwe nemageneti. Kana zvambotaurwamasoja ekudzivirira chirwerekukanganisa kugona kwetachiona kuita mahormone, sengethyroxine,hypothyroidisminomuka.
Kana iwe usina nzira dzekugadzirautachiona kemikarizvakanaka,chirwere chetachionahazvidziviriki. Naizvozvo, avo vane zvikamu zvekuvhiya zvakabviswa kuvhiya vanogona kumhanyira mune iyi nyaya. Kubviswa kwechikamu chakakosha cheiyogland glandzvinokanganisa kugona kuburitsa mahormone. Mhosva dzakadai seidzi dzinogona kuda kukosha kwemishonga kuti ibudise zvaunoda.
Imwechikonzero chinowanzoitika che hypothyroidismndiko radiation kurapwa. Nekuda kweakogland glandPositioning, radiation kurapwa kwekenza yemutsipa nemusoro kunogona kukanganisa yakogland gland. Chekupedzisira, mishonga inogona kukanganisa yakoutachiona basauye kuberekahypothyroidism. Mhando dzakasiyana dzemishonga dzinogona kubatsira kuneisingashandisi utachiona; saka, zvakanaka kubvunza yakonezveutanomupi wezve kukanganisa kwemishonga kunogona kuva nako.
Chikonzero chakakurumbira chehyperthyroidismndizvo Chirwere chemakuva . Iyi isingafadzi mamiriro anotungamira kune yakawandisa secretion yehomoni. Icho chikonzero kuve antibodies chinofadza iyo thyroid receptors kuti iite iyo yegland gland kuti ibudise yakawanda thyroid thyroid. KubvaChirwere chemakuvainowanzoonekwa mumhuri, zviri nani kuudza chiremba wako kana imwe kana dzimwe hama dzako dziine chirwere.Chirwere chemakuvaariautoimmune kusagadzikana.
Wakoimmune systemSaizvozvowo kurwisa utachiona kune zvinoitika nehypothyroidism. Nekudaro, mune ino kesi, kurwisa kunotungamira mukuwedzeredza kweutachiona kemikari.
Thyroiditis inoitika nekuzvimba kweiyo thyroid. Iko kuzvimba kunotungamira kuneutachiona kemikarikudonha uko kunogona kugara kusvika kumwedzi mitatu izere. Muzviitiko zvakawanda, iri ndiro danho rekutanga kuendahypothyroidism.
zvakadii kuronga b mapiritsi anoshanda
Chekupedzisira, kuwandisa kwe ayodhini arichinowanzo kukonzera hyperthyroidism.Uturu hwehomoniinogadzirwa nekuda kwekudyiwa kweayodini muhutachiona hwako. Zviri zvemuzvarirwo kufunga kuti ayodini yakawandisa inotungamira mukuwedzeredza kweutachiona kemikari. Izvo zvakakoshawo kuti utarise ziso kune ayodini mumushonga. Mimwe mishonga, senge amiodarone, ine iodine hombe.
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism inokonzeresa
Hazvina kukwanautachiona kemikari
Zvikamu zvakabviswa zvehutachiona
Kuwedzeredza hutachiona hutachiona
Huwandu hwevanhu vakasanganahypothyroidismzvingakushamise.Hypothyroidisminokanganisa 4.6% yevanhu munyika dzakabatanaane makore gumi nemaviri zvichikwira. Aya manhamba anogona kushumwa zvakanyanya nekuti kesi zhinji dzehypothyroidismdzakapfava uye hadzikoshese hupenyu hwevanhu. Zvakare,hypothyroidismiri kunyanya kuvakadzi kupfuura varume. Panyaya yemazera emakore, ndiyo yakanyanya kuwanda kune vanhu vanopfuura makore makumi matanhatu.
Zvakare,hyperthyroidisminogona kuonekwa mune vakawanda vakadzi kupfuura varume. Iyo chaiyo chiyero yevakadzi kuvarume ndeye 5-1. Pakazara,hyperthyroidismhaina kujairika kupfuurahypothyroidism. Inomira pane inotarisirwa muzana ye1.2. Zvisinei, mune dzimwe nguva, nhamba iyi inogona kuwedzera. Iyi ndiyo kesi yevakadzi vanopfuura makore makumi mashanu ekuberekwa. Kune vanhu ava, mikana yekusanganahyperthyroidismkuwedzera kusvika ku4,5%.
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism kuwanda
4.6% yevaAmerican vanopfuura makore gumi nemaviri
Ratio yevakadzi kuvarume ndeye 5-1
1.2% yevagari vemuAmerica
4.5% kune avo vanopfuura makore makumi mashanu ekuberekwa
Zvakaoma kuziva zviratidzo zvehyperthyroidism. Izvi zvinonyanya sezvo kuomarara kwezviratidzo kuchisiyana. Uye zvakare, mazhinji ezviratidzo anogona kuverengerwa pasarudzo yemararamiro. Semuenzaniso, zvinonyengera kuziva chinokonzeresakurema kuwedzera. Naizvozvo zvakanaka kutarisa kune akawandazviratidzo zvehypothyroidism.
Kunze kubvakurema kuwedzera, kuneta ndicho chiratidzo chechipiri chakajairika chekutarisa. Nekuti izvi zviratidzo zvakajairika zvekukwegura, zvinogona kuramba zvichinetsa kuziva kuti yako thyroid ndiyo nyaya.
Kana irihyperthyroidism, iri rinoregerera zvishoma. Kazhinji, hazvina kuoma kuziva. Izvi zvinokonzerwa nekuvapo kwezviratidzo zvinowedzera. Zvakare, tarisa kunze kune zviratidzo zveChirwere chemakuva, inova iyo nhamba yekutanga chikonzero chehyperthyroidism. Maziso anoputika chiratidzo chinoratidza cheChirwere chemakuva.
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism zviratidzo
Zvishoma nezvishomaMamhanyiro emoyo
Yakawedzera ropa cholesterol
Kuchinja kwekuenda kumwedzi
Kutya uye kunetseka
Tsvina kushaya simba
Pasina kazhinji nguva
Kune nzira shoma kwazvo dzekuzivahypothyroidism. Muchokwadi, kune nzira mbiri chete, uye imwe chete ndiyo inoonekwa seinoshanda kwazvo. Kuongororwa kwechiremba ndiko kusimba kwenzira mbiri. Anezveutanomupi, kanaendocrinologist, ichatsvaga yekuudza zviratidzo zvehypothyroidism .
Nekudaro, sezvambotaurwa, zvingave zvakaoma kunongedza kana zviratidzo zvichibvahypothyroidism. Sakakuongororwa ropandiyo nzira inovimbwa nayo.Kuongororwa kweropaunogona kuyera huwandu hwethyroid-inosimudzira mahormone( TSH ). Izvi zvicharatidza mamiriro akoutachiona kemikarikugadzirwa. KumusoroTSHnhanho dzinoratidza kuti unehypothyroidismsezvo muviri wako uri kuyedza kuburitsa zvimwe.
Zvakafanana nehypothyroidism,kuongororwa ropainogona kuratidza kuva chiratidzo chinoshanda chehyperthyroidism. Akadzika mazinga eTSHratidza kuti thyroid yako yakanyanyisa kushanda.
Uye zvakare, utachiona scan inogona zvakare kuratidza kana paine zviratidzo zvehyperthyroidism. Iyi scan ichaona huwandu hweiyodini yakaunganidzwa muhutachiona hwako.
chii chingaunza BP yako pasi
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism kuongororwa
Kurapa kwakanyanya kwehypothyroidismmushonga wezuva nezuva wemuromo unonzi syntheticutachiona kemikari levyothyroxine( Synthroid ). Chinangwa chekutora chakataurwa mushonga ndechekuenzanisa yakomahormone. Kureba kweiyo muyero kunogona kusiana, kunyangwe muzviitiko zvakawanda, inodikanwa kwehupenyu hwese. Padivi rakajeka, pane mashoma kwazvomhedzisiroyakanamatira kushandiswa kwelevothyroxine chero bedzi muyero wacho wakakodzera.
Nematatu anoratidzwa nzira dzokurapa , kurwisahyperthyroidismzvinotyisa zvishoma. Nzira yekutanga ine mishonga. Imwe mishonga inorambidza iyo thyroid kuburitsa mahormone.
Radiotic kurapwa imwezve yakajairikanzira yekurapauye inowanzoonekwa semutsara wekutanga wekurapa maererano nemitemo yeAmerican Thyroid Association. Pfungwa ndeyekubvisa maseru ari kuburitsa mahormone. Chinangwa chekudzikisa kugadzirwa kwemahormone chinosara.
Mune mashoma kesi, chiremba anogona kukurudzira iyo yakasarudzika kana yakazara kubviswa kweakogland gland . Mushure methyroidectomy, iwe uchazoda kutsiva kwetachiona iyo inovavarira kudzivirirahypothyroidism. Mune zvimwe zviitiko, kana maronda eparathyroid-ayo anodzora calcium balance uye ari padyo nechero gland - akakanganiswa panguva yekuvhiyiwa, ungangodawo calcium calcium kutsiva.
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism kurapwa
Mazuva ese mishonga yemuromo (levyothyroxine)
Kusarura kana kubvisa zvachose iyogland gland
Njodzi zvinhu zvehypothyroidismvanokurudzirwa zvakanyanya nezera uyenhoroondo yemhuri. Vakadzi vane nhumbu mumwedzi mitanhatu yapfuura vari zvakare panjodzi ofmamiriro ehutachiona. Nyaya dzakakomba dzinosanganisira iyokugadzirwa kwetachiona kemikariunogona zvakare kumhanya mumhuri. Naizvozvonhoroondo yemhurizvirokwazvo a chikonzero .
Njodzi zvinhu zvine chekuita nehyperthyroidismzvishoma pane nhamba kupfuura njodzi dzinopahypothyroidism. Kutanga,nhoroondo yemhuriinoramba iri nyaya, kunyanya kana zvasvika kuneChirwere chemakuva. Zvakare zvakare, vakadzi vari panjodzi yekuva nematambudziko ehutachiona. Chekupedzisira, nhoroondo yechirwere chisingaperi inogona zvakare kutungamira kunehyperthyroidism.
unotora sei z pack
Iva nenhoroondo yemhuriofchirwere chetachiona
Vakwegura makumi matanhatu
Yakagamuchirwa radiation kumutsipa wako kana kumusoro chifuva
Wakave nekuvhiyiwa kwetachiona
Iva neautoimmune chirwere, senge Type 1 chirwere cheshuga kana chirwere checeliac
Wakarapwa naiodine ine radioactivekanaanti-thyroid mishonga
Chirwere chisingaperi nhoroondo yemunhu
Kunze kwekungogara uchiongorora avo vari panjodzi huru, hapana nzira chaiyo yekumirahypothyroidism. Kana iwe uchiziva kuti uri panjodzi, inogona kunge iri zano rakanaka kuti uongororwe nguva dzose.
Sezvakangoitahypothyroidism,hyperthyroidismhaigone kudzivirirwa nenzira kwayo. Ikozvino hapana nzira dzinozivikanwa dzakabudirira. Izvi zvinoita kuti zvinyanye kukosha kune avo vari panjodzi yekuvhenekwa nguva dzose.
Hypothyroidism vs. hyperthyroidism kudzivirira
Kugara uchiongorora uye bvunzo
Nguva yekuona chirembahypothyroidismkanahyperthyroidism
Kuve nezvinopfuura chimwe chezviratidzo zvambotaurwa chiratidzo chekuti unofanirwa kuona chiremba. Nekuti iwo makuru zviratidzo sekuneta uyekurema kuwedzerazvinogona kunetsa kunongedza, zvakakosha kuti uzive panopfuura chimwe chezviratidzo izvi. Izvi zvinokutungamira iwe kuchokwadi chekuti iwe unofanirwa kutsvaga kurapwa. Izvi zvinoramba zvirikuondanezvimwewo zvakajairikazviratidzo zve hyperthyroidism.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezvehypothyroidismuyehyperthyroidism
Hyperthyroidism inogona kuwedzera njodzi yemoyo mutinhimira nyaya uye kuunza seAtrial fibrillation. Kana hyperthyroidism ikasiiwa isina kurapwa, inogona kutungamira kune osteoporosis uye kutsemuka. Hypothyroidism ine mashoma matambudziko kana ichienzaniswa ne hyperthyroidism.Hypothyroidisminoitika kakawanda kupfuurahyperthyroidism.Hypothyroidismzvakanyanya kuoma kuona kupfuurahyperthyroidismkubvirakurema kuwedzerauye kuneta zviratidzo zvinozivikanwa zvekukwegura.
Unogona kuva nazvo herehyperthyroidismuyehypothyroidism?
Nekuti iwo mativi maviri emari imwe chete, haugone kuva navo panguva imwe chete. Izvo hazvigoneke kuve neyakawandisa pamwe neisina kukwana huwandu hweutachiona kemikari.
Hyperthyroidisminogona kuvahypothyroidism. Iyi switch inoitika nekuda kwemushonga uyo unotarisira kugadzira yakoyakanyanyisa kuita utachionakushoma kushoma. Mune zvimwe zviitiko, chiitiko chinodonha zvakanyanya, izvo zvinogona kukonzerahypothyroidism.
Tadalafil muyero, mafomu, uye masimba
Izvo dermatologist inogona kukuitira iwe
how to get high blood pressure pasi
ndeupi mushonga wepanyama wakanyanya weBP
inogara kwenguva yakareba sei nabumetone musystem yako
chii chiri nani kune arthritis ibuprofen kana acetaminophen
musiyano uripo pakati penzvimbo yakakwira neepasi yakaderedzwa inishuwarenzi yehutano
mushonga wakanakisa wekupwanya huro uye nemhino dzakazara